Nohavaozina ny fotodrafitrasa : afaka miatrika asa avy hatrany ny mpianatry ny ESSA | NewsMada
Nohavaozina ny fotodrafitrasa : afaka miatrika asa avy hatrany ny mpianatry ny ESSA
Par Taratra sur 13/05/2017
Mandroso i Madagasikara raha mitovy amin’ny fiasan’ny ESSA avokoa ny sekoly ambony eto amintsika. Afaka miditra amin’ny sehatry ny asa avy hatrany ny mpianatra vita fianarana, araka ny nambaran’ny mpitantana orinasa.
Mamoaka mpianatra afaka miatrika ny tsenan’ny asa avy hatrany ny Sekoly ambony momba ny fambolena sy ny fiompiana eny amin’ny oniversiten’Antananarivo (ESSA), araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny orinasa Agrivet, ao amin’ny vondrona SMTP, Rasamimanantsoa Riana, omaly teny Ankatso. Porofon’izany, mpianatra avy eny amin’ny ESSA avokoa ny ankamaroan’ny mpitantana ambony ao amin’ny orinasa. Isan-taona mandray mpianatra tsy latsaky ny 10 izy ireo mikarakara fanohanan-kevitra na mianatra asa.
« Niara-niasa tao anatin’ny taona maro ny roa tonta satria mpamatsy fitaovana amin’ny tontolo ambanivohitra ny Pôle Agri ary manohana koa ny fianarana miompana amin’ny fambolena sy ny fiompiana », hoy ny tale jeneralin’ny Pôle Agri, Yanish Ismael. Mbola hitohy ny fanohanana amin’ny fizarana fitaovana azon’ny mpianatra kirakiraina avy hatrany rehefa hiasa izy.
Endrika iray amin’ny fiaraha-miasa ny famatsian’ny orinasa ny fanitarana sy fanatsarana ny fotodrafitrasa ampiasain’ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny mpandraharaha. Mitentina 38 tapitrisa Ar ny asa rehetra ahitana birao fiasana, toeram-pivoriana sy efitrano fianarana. Teo aloha, tsy manana birao ny 50%-n’ny mpampianatra noho ny tsy fahampian’ny efitrano. Ankehitriny, voavaha ny olana ho an’ny mpianatra sy ny mpanabe. Nandray anjara ny mpampianatra mpikaroka, ny mpianatra tranainy, ny Pôle Agri nahatontosa ny fanavaozana. Ahafahana mampitombo ny mpianatra ho raisina 130 ny fanitarana ny fotodrafitrasa ho an’ny Master, araka ny fanazavan’ny mpiandraikitra ny mention agriculture ESSA, Andriamaniraka Harilala. Présalaire avy amin’ny minisiteran’ny Fambolena no omena ny mpianatra fa tsy vatsim-pianarana mahazatra toy ny an’ny mpianatra rehetra eny amin’ny oniversite.